2013-10-20 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
Android ဖုန်းများအတွက် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်များစုစည်းမှု(apk)
IN Android - ON Saturday, October 26, 2013 No comments
နည်းပညာကို လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် မိခင်ဘာသာစကား အပြင် Second Language ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း တတ်မြောက်ထားဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာနေသူဖြစ်စေ၊ နည်းပညာကို လေ့လာနေသူဖြစ်စေ ဒုတိယဘာသာ စကားဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာမှာ လိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ PC သုံး Software တွေ၊ ဖုန်းသုံး Application တွေ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းများအတွက် ကျွန်တော်စုဆောင်းထားတဲ့ Android ဖုန်းများအတွက် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် Application များကို စုစည်းပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်စုံဆုံးမဟုတ်ပေမယ့် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အဘိဓာန်များကတော့ Myandroid Dictionary, Ornagai Dictionary, Planet Dictionary, Shwebook Dictionary နဲ့ sm3WordFinder တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Download>>> Solifiles (or) Uppit
Special Credit to ==> ဘူးရေမျက်ရွာ
မည်သည့် Android ဖုန်းတွင်မဆိုထည့်သွင်းနိုင်မည့် Smart Zawgyi3ထွက်ရှိလာပါတယ်။ Android version 1.6 မှ Android 4.4 ဖုန်းများအားလုံးကို ဒီ Tool နဲ့မြန်မာစာသွင်းနိုင်မှာပါ။ ကွန်ပျူတာ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းထွက် Sony တွေမှာ ဥပမာ Xperia C, Xperia L Build Number အမြင့်တွေဆို Font သွင်းတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်… အရင်ပုံစံတွေနဲ့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး… နောက် Huawei G610-U00,Y320-U00 ဆို ၀လုံးတွေထပ်နေတယ်… Y511-U00 ဆိုမြန်မာစာကိုမပေါ်ဘူး… အဲ့ကောင်တွေမှာမြန်မာစာအဆင်ပြေအောင်… နောက် Smart Zawgyi
သွင်းပြီးအဆင်မပြေလို့ပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်လဲပြန်ဖြုတ်လို့ရအောင်ဒီ Version မှာပြင်ပေးထားပါတယ်… နောက် Bootloop မပတ်အောင်လဲ ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ မ Run ခိုင်းပဲ ဖုန်းပေါ်ကနေ Run ခိုင်းထားတယ်… Font ပုံစံကိုလဲမသေးအောင် ကြည့်ရှု့လို့ကောင်းအောင်ပြင်ပေးထားပါတယ်။ Smart Zawgyi3Tool ကိုရေးသားသူကတော့ Developer ကိုကျော်စွာသွင်ဖြစ်ပါတယ်။
credit>Kyaw Swar Thwin
IN Hacking Tools - ON Saturday, October 26, 2013 No comments
Keylogger ဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်လို့ရတာလဲ..၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုရသလဲဆိုတာတော့ ရှင်းပြစရာမလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ အခုဒီကောင်လေးက Windows 8 မှာပါ ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက သူ့ကို Install မလုပ်ခင် Antivirus ကိုတော့ပိတ်ထားပေးပါ။ အချို့အားကောင်းတဲ့ Antivirus တွေက ဒီ Program ကိုခွင့်မပြုတတ်တာကြောင့်ပါ။ ဒါက ခြေရာခံ Software ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေကို Support လုပ်သလဲဆိုတာအောက်မှာကြည့်လို့ရအောင်မူရင်းလင့်ကအတိုင်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
IN Internet Tools - ON Saturday, October 26, 2013 No comments
WebcamMax 7.7.8.8 | 25.4 MB
Homepage – http://www.webcammax.com/
Download>>> Uppit (or) Tusfiles
Moborobo 2.1.5.855 (Download Apps Store On PC & Manager) | 23.3 MB
ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ PC နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Application များကို Install လုပ်ခြင်းနှင့် Uninstall လုပ်ခြင်းများ သီချင်းများ ဓါတ်ပုံများ စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရာမှာအဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
အသုံးပြုပုံကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ကြည့် နိုင်ပါတယ်ဗျာစမ်းသပ်အသုံးပြုချင်သူများအောက်က Link မှာဒေါင်း
Wallpaper and theme downloads:awide range of downloadable wallpapers and the choice to install Mobo Launcher,aunique Android home desktop replacement application. It enables you to add themes to your launcher, customize your icons, dock, as well as scrolling and transition effects, to create and customizeaphone with your own unique designs in mind. Multi-media file sync and file manager: Sync music, videos and images between your device and PC with complete transparency by using the file manager tag. More advanced features, such as editing music playlists, setting ringtones, changing wallpaper, and editing images can be found in the Tune and Image tag. Send and receive messages from your PC: With Moborobo you can send, receive and organize your SMS messages from your PC. It also enables you to group send messages, as well as back-up those important and interesting conversations.
Change in 2.1.5.855
1.Supporting Thai language;
2.Added support for users to move files within file manager via copy and paste.
1.Added quick dial feature to the Data tab;
2.Added incoming call notification;
3.Improved backup/restore of contacts, by allowing backup and restoring of Favorites in your contacts.
1.Added playlist management;
2.Added backup and restore function for playlist;
3.Added backup and restore function of the application icon positioning on your iDevice.
Active Partition Recovery Professional 9.5.0 Full Key Free Download
IN Recovery Software - ON Friday, October 25, 2013 No comments
ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူငယ်ချင်းတို့hdd ထဲ က partition အပိုင်းတွေ ပျောက်သွားတာတို့data တွေ မှားဖျက်မိတာတို့ ကို ပြန်ရှာပေးမယ် ကောင်လေးပါ
နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းလေးပါ အထဲမှာ ကီးပါထည့်ပေးထားပါတယ် လိုအပ်ရင်အောက်မှာနော်
Download Here >>> Link 1 / Link2/ Link3/ Link 4
Kingo Android Root 1.1.0.1756 | 23 MB
IN Android - ON Friday, October 25, 2013 No comments
မြန်မာတွင် အသုံးအများဆုံးဖုန်းများနှင့် အခြား ဖုန်းအမျိုးပေါင်း များစွာ ကို One click root လို့ ရတဲ့ Pc Software လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းပြင်တဲ့ ဆားဗစ် သမားများနှင့် မိမိကိုယ်တိုင် ကလိချင်သူများ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလေး ဖြစ်တာကြောင့် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Software လေးကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 19 MB ပဲ ရှိပါတယ်။ Software ကို ကွန်ပူတာမှာ Install လုပ်ပါ။
ဖုန်းမှာ usb debugging ဖွင့်ထားပါ။ ဖုန်းနှင့် ကွန်ပူတာကို USB ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
Root လို့ ရတဲ့ ဖုန်းအမျိ်ုးအစားများကိုအောက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။
HTC Magic HTC Legend
Samsung i959 Samsung i9000
Improved the stability of device connection.
Tested the new released devices from Samsung, LG, etc.
Fixed several bugs on driver installation.
Minor bug fixations.
IN Internet Download Manager - ON Friday, October 25, 2013 No comments
IN Driver Software - ON Friday, October 25, 2013 No comments
IN Antivirus - ON Friday, October 25, 2013 No comments
PowerArchiver 2013 Toolbox Edition v14.00.32 final full with keygen
IN Utilities - ON Friday, October 25, 2013 No comments
PowerArchiver 2013 Toolbox Edition v14.00.32 | 18 MB
Encryption Suite with– full OpenPGP encryption support. FIPS 140-2 certified AES encryption. Encrypt/Decrypt hundreds of files at the same time.
PowerArchiver Cloud – –Full support for Dropbox, Google Drive, SkyDrive, Box.Net, Amazon S3 and Azure. Access your Clouds from within PowerArchiver.
Compare Product Features : http://www.powerarchiver.com/powerarchiver-toolbox/
Acoustica Mixcraft 6.1 Build 217 full with serial/...